Ogaden News Agency (ONA) – Wafti ka socday jaaliyadda Copenhagen –Denmark oo kormeer hawleed ku tagay dhowr magaalo
Wafti ka socday jaaliyadda Copenhagen –Denmark oo kormeer hawleed ku tagay dhowr magaalo
Posted by ONA Admin	/ October 1, 2012
Waxaa kormeer shaqo kusoo kala bixiyay magaalooyin kamidah wadankaDenmark29-30 September 2012, wafti sare oo ka socday Jaaliyada Copenhagen –Denmark.
Ujeedada uu waftiga uu socdaalkan labada maalmood ah oogu soo kala bixiyeen ayaa kamid ahayd wacyigalinta bulshada ku dhaqan magaalooyinka Odense iyo Århus, iyadoo labadan magaalo ay kunool yihiin dadwayne aad utiro badan oo kamidah Jaaliyada S. Ogadenya ee wadankaDenmark.
Mudane Xasan Macalin oo kamid ahaa waftigan kormeerka kutagay magaalooyinka Århur iyo Odense ayaa ka jeediyay madashii uu shirku kadhacay ee magaalada Odense warbixin aad uqiimo badan oo ku saabsan xaaladaha uu marayo halganka iyo wadahalka u furmay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya JWXO iyo dawlada Itoobiya bishan horaateedii. Mudane Xasan oo kamid ahaa gudigii Wada-Xaajoodka Jabhada ONLF ee wadahadalku ku dhexmaray wafti ka socday Itoobiya caasimada wadanka Kenya eeNairobi 6-7 dii bishan September 2012, ayaa xubnnaha shirka ka soo qaybgalay si qotodheer oo faah faahsan uga waramay wixii ku dhexmaray waftigii ka socday Itoobiya iyo Jabhada ONLF. Wadahadalkan oo ahaa mid aad iyo aad xasaasi u ah ayay labada wafti kaga wadahadleen siduu sheegay mudane xassan Macallin qodobadii gundhiga iyo aas aaska u noqon lahaa sidii xal waara oo cadaalad iyo nabadgalyo u horseeda looga gaadhi lahaa Aayo-Katashiga uu shacabka Somalida Ogadenya halganka ugu jiray mudada dheer.
Dhanka kale waxaa isna warbixin aad uqiimo badan oo kusaabsan waxqabadka Jaaliyada Denmark kasoo jeediyay Mudane C/laahi Colaaad, Waxaa kale oo isna wacdi diini ah oo aad u dhaqaajiyay shucuurta kasoo qayb galayaasha shirka soo jeediyay Sheekh Xasan, ajir iyo xasanaad Allaha kasiiyee. Waxaa sidoo kale warbixin waafi ah oo faah faahsan soo jeediyay Mudane Maxamed Cali, Agaasimaha Guud ee Hogaanka Watfaafinta JWXO, isagoo si hufan uga haqabtiray dadkii madasha joogay heerka ay maanta joogto Warfaafinta Halganka Ogadenya oo kamid ah lafdhabarka halganka iyo saamaynta ay kuleedahay horusocodka halganka.
Kormeerkan iyo shirarkii ay waftigu layeelatay guud ahaan dad waynaha reeOdensegaar ahaan hawlwadeenka Jaaliyada ee kudhaqan aagas waxay kusoo gaba gaboobeen jawi aad uwanaagsan oo labada dhinacba ay aad ula dheheen warbixinadii iyo waraysiyadii ay isdhaafsadeen. Waxay Jaaliyada reeOdensesoobandhigeen talooyin iyo tusaalooyin dhaxalgal ah dhanka kale waftigu waxay sihufan oo cilmiyaysan uga jawaabeen dhamaan su,aalihii ay dad waynuhu waydiiyeen.
Waxaa la’isku balansaday in lajoogteeyo lana dardargaliyo waxqabadka Jaaliyada Somalida Ogadenya eeDenmarksilooga midho dhaliyo mashruuca hanashada Xoriyada ee guud ahaan maanta shacabka Somalida Ogadenya ay sihagar la,aan ah oogu wada mashquulsan yihiin hirgalintiisa.